Wasiirka arimaha gudaha ee Puntland oo mashaariic xariga kaga jaray degmada Burtinle (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 2, 2019 7:20 b 0
Wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaarada arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland ayaa maanta gaaray degmada Burtinle ee gobolka Nugaal .
Maamulka degmada Burtinle iyo qaar kamid aha dadweynaha Burtinle ayaa wafdiga Wasiirka ku soo dhaweeyay duleedka magaalada.
Wasiirka ayaa degmada xariga kaga jaray mashaariic horumarineed oo degmada laga hirgaliyay.
Wafdiga uu hogaaminayo wasiirka ayaa waxaa lafilayaa in uu ugudbo magaalada Gaalkacyo si uu uga qayb qaato baaritaanka falkii dilka iyo kufsiga ahaa ee ka dhacay magaalada Gaaalkacyo.
Wiil uu dhalay hogaamiyihii hore Al-Qaacidda oo la baadi goobayo